5 khiyaano si aad uga faa iideysato sanduuqa Google | Androidsis
Inbox waa Sharadka cusub ee Google awoodaan si habboon u maaree dhammaan emaylka imaanshaha sanduuqa. Mid ka mid ah yoolalka Google iyo shirkado kale oo badan oo isku dayaya inay helaan qaaciddada adeegsadaha si uu u helo awood run ah oo uu ku xakameeyo wax kasta oo ku saabsan xisaabaadka emaylkooda.
Barnaamijkan cusub ee loo yaqaan Inbox ayaa leh waxyaabahiisa iyo ma fududa in wax laga qabto sida ay umuuqato marka hore. Isticmaalayaasha qaar ee haysta emaylkooda si ay u arkaan fariimaha qaar, waxaa laga yaabaa inaysan u qalmin laakiin adeegsadayaasha horumarsan, hubaal, haddii aad taqaano sida saxda ah ee aad u isticmaasho, waad ka faa'iideysan kartaa. Kuwani 5 talooyin ama tabaha ah ee aan kaaga soo dirno Androidsis waxay isku dayaan inay ka caawiyaan dhammaan noocyada isticmaaleyaasha inay ka faa'iideystaan ​​sanduuqa Google.
1 1. Dib u dhigid
2 2. Abuur koox fariin ah
3 3 Xusuusin
4 4. U isticmaal biinanka emaylka
5 5. Dhaqdhaqaaqyada oo ku jira Inbox
1. Dib u dhigid
Dusha sare, markaan qabano emayl, dhowr astaamo ayaa muuqda. Mid ka mid ah ayaa muhiimad weyn u leh dib u dhig emaylka wakhti cayiman galabnimada ama maalinta ku xigta, kaas oo noqon doona markii Inbox uu mar kale na xasuusin doono emaylkan muhiimka ah. Astaantan ayaa ah astaanta saacadda waxayna naga caawin doontaa inaan dib u dhigno emayl iyadoo ay suuragal tahay in wax laga beddelo taariikhda adoo dooranaya maalinta iyo waqtiga ama xitaa goobta.
2. Abuur koox fariin ah
Fariimaha kooxaha ama xirmooyinka wax badan ayey ku leeyihiin miirayaasha nolosha. Isku xirka isticmaalaha 'Inbox user interface' wuxuu u qaybsan yahay kooxo kala duwan oo ka socda dhinaca hagidda dhinaca aad ka heli karto safarka, ka adeegashada ama dhaqaalaha. Mid kasta oo ka mid ahi wuxuu leeyahay nuxur la mid ah sababtaas awgeed ayaa loo ururiyaa.
Koox cusub ayaa laga abuuri karaa kooxdan jihada dhinac ka socota. Waxaa jira ikhtiyaar ah in "hoosaad cusub laga abuuro" xagga hoose oo halkan waxaad ka kooxayn kartaa xiriiro kala duwan sida asxaabta adoo midba mid ugu daraya emaylladooda.
Laga soo bilaabo isla dhinac guddi dhinac navigation yihiin xusuusinta in ay yihiin ku xidhan Google Now iyo Keep si aad u dhex gasho sida ugu fiican barnaamijkan cusub ee Google. Waxaad ku qori kartaa xusuusin hadba waqtiga, qofka iyo meesha la geyn doono dhammaan aaladaha ku rakiban Inbox.
Waxay noqon kartaa dhaqaaji xusuusin isla qaybta ah adoo adeegsanaya badhanka sabeynta si aad u abuurto mid.
4. U isticmaal biinanka emaylka
Biin ku dhejinta emaylka ayaa la mid ah calaamadeynta iyo xusuusin. Had iyo jeer way muuqan doontaa xitaa haddii la akhriyey ama la kaydiyey. Waa hab fiican in wax la galiyo heegan oo la helo xusuusin muuqaal ah si aanaan u ilaawin.
Biinkan ayaa ku yaal qaybta kore ee baarka markii aad furanayso emayl ama marka aad midkood ku dhejiso sanduuqa.
5. Dhaqdhaqaaqyada oo ku jira Inbox
Dhaqdhaqaaqyada waxaad ku sameyn kartaa ficilo kala duwan sanduuqa Inbox. Iyada oo leh tilmaamidda ama u dhaqaaq dhinaca midig waxaad calaamadeyn kartaa emayl sidii aad sameysay, halka mid bidix dib u dhigayo ilaa waqtiga ama taariikhda la doonayo. Xoqin kale oo ku saabsan kooxaysiga emayllada ayaa ku calaamadeyn doonta iyaga sidii in dhammaan emaylladan la sameeyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » 5 khiyaano si aad uga faa'iidaysato sanduuqa Google
Codsigan waxaa lagu galayaa casuumaad saaxiib ama saaxiib, ama adoo ka codsanaya Google. Maadaama aanan garanaynin haddii saaxiibkay adeegsado adeeggan, waxaan qaadaa ikhtiyaarka labaad oo waxaan ka codsadaa Google. Xitaa iskuma mashquulin inay ka soo qayb galaan. Ha u daayaan codsigooda.